एटिएमबाट पैसा झिक्न आउनेहरुले सेनिटाईजर नै चो’र्न थालेपछि, यस्तो है’रानी ! [ भिडियो सहित ] – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/एटिएमबाट पैसा झिक्न आउनेहरुले सेनिटाईजर नै चो’र्न थालेपछि, यस्तो है’रानी ! [ भिडियो सहित ]
काठमाडौँ । देशभर लकडाउन गरिएको छ । को’रोनाको त्रा’स छ जताततै । यहिबीचमा सबैभन्दा सचेत हुनुपर्ने ठाउँ नै एटिएम हो । पैसामा सं’क्रमण बढी हुने जो’खिम र एटिएम छोएर प्रयोग गर्ने चीज भएकाले एटिएममा सेनिटाईजर प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सचेतनासमेत सबैमाझ पुग्न जरुरी छ । तर काठमाडौँका केहि बैंकहरुले एटिएममा राखिएको त्यहि सेनिटाईजर ग्राहकले चो’र्ने थालेपछि ठुलै हैरानी खेपिरहेका छन् । यस्तै है’रानी भो’ग्नेमध्येको एक हो सनराइज बैंकको तिनकुनेस्थित शाखा ।
यता तिनकुनेकै ग्लोबल आइएमइ बैंकको एटिएममा पनि सेनिटाईजरको बट्टा टेपले टाँसेर झु’न्ड्या’एर राखिएको छ । अरु बैंकमा के के देखिए ?
भिडियो हेर्नुहोस अर्थ सरोकार बाट
नेपालमा प्रहरीले कुटे, डाक्टरलाई ! डाक्टर साक्टर’ चिन्दैनौ भन्दै भकुरे ! त्यसपछि यस्तो ! (भिडियो हेर्नुस)
मैले चाहे भने सिमाना बि बाद सजिलै मिलाउन सक्छु । सुजाता कोईराला
एकैदिन थपिए ८३ संक्रमित , काठमाडौं र भक्तपुरमा पनि भेटियो,